आउटसाइडरको डायरी – २ – Mahesh Shrestha
यस आउटसाइडरको डायरी खण्डमा मैले ट्विटेका र फेसबुकमा स्टाटसका रुपमा पोस्टेका केही पोस्टहरु संग्रहित गर्ने प्रयास गरेको छु । पढ्नुहोला । मन परे शेयर नि गर्नुहोला । धन्यवाद ।
केही मित्रहरु मलाई कामको अफर गर्छन् । म कति दिनुहुन्छ भनेर सोध्छु । उ केही समय हराउछ । अनि बजारमा गाइगुइ हल्ला चल्छ, ‘उसलाई त कामको कुरा गर्नै हुन्न यार सिधै कति दिन्छस् भनेर सोध्छ । साह्रो व्यावसायीक भइसकेछ यार अचेल उ त ।’अनि, म चाँही सधै तपाईंहरुको काम भोको पेटमै गरि बस्नु ? सित्तैमा गर्दिए मिल्ने साथी, नगर्दिए व्यावसायीक । अजब छ बा । — feeling annoyed.
एकछिन फेसबुक के डाउन भाको, दाहिने हातै भाचिए झै भको छ कसै-कसैलाई । ञिः
हजुर ? व्र्लड कप ? छैन त हेरेको ! सोसाइटीमा नपरे नी यत्रै सिती !
खै कल्ले कताबाट चुनावको टिकट पाएनन् रे; बर्षमा एकपटक घर जाने बसको टिकट नपाउनेलाई सोध टिकट नपाउनुको पीडा । #पिडीत #दशैं
लुंगी हल्लाकै भरमा नेपालबाट करोडौं कुम्लाएर लान्छन्, हाम्राले भने पानीसम्म पनि माग्न पाउँदैनन् । बिडम्वना ! #नेपालीचलचित्र #हिन्दीचलचित्र #चलचित्र
फेसबुकमा नोटिफिकेशन आकै भरमा जन्मदिनको शुभकामना दिन छाडेको केही बर्ष भो । यसबाट कसैलाई चित्त दुखेको भए माफि । जीवनमा आफ्नो जन्मदिन त बुढी र म बाहेक कसैलाई थाहा नदिने मुन्छे जो परियो । यसलाई अन्यथा नलिनु होला । फेसबुककै भरमा एकैजनालाई बर्षमा २–३ चोटी शुभकामना दिँदा–दिँदा हत्तु भएको भोगी मुन्छे !
यसो गरेको छु, उसो गरेको छु…यती पैंसा छुट्याएको छु, उती रकम छुट्याएको छु । साला, आफ्नै गोजीबाट झिकेर दिना ला जस्तो । जनताको पैंसा जनतालाई दिन नि कस्तो नौटंकी ! — listening to Budjet Bhasan 2070.
काठमाण्डूकालाई मात्र पढाएर, बुझाएर, देखाएर देशले पढ्छ, बुझ्छ, देख्छ भन्ने कार्यक्रम आयोजकहरुलाई चेतना भया…जान्न, हेर्न र बुझ्न चाहने मनुवा मोफसलमा पनि त्यतीकै छन् ।
भूपिनको ‘चौबीस रिल’ भ्याएर अमर न्यौपानेको ‘सेतो धरती’ पढ्दै छु । दुवै कृतिमा पश्चिम नेपालको परिवेश पढ्न पाउँदा रमाइलो लागिराच । सेतो धरती पढुन्जेल भने मलाई पाँच सात बर्ष अगाडि पढेको होमनाथ सुवेदीको ‘न्याउली’ उपन्यास झल्झली याद आयो । त्यो पनि बालबिवाहकै सेरोफेरोमा केन्द्रित छ । प्रस्तुति नि गज्जव छ त्यसको । २०४३ सालमै प्रकाशित कृति हो त्यो । सेतो धरती भने हालै (प्रथम प्रकाशन २०६८) प्रकाशित । सायद समय परिवर्तनशिल छ भनेझैं आधुनिक जमानामा यसको चर्चा बढी हुनुमा सञ्चार माध्यमहरुको बदलिँदो स्वरुपले पनि होला कि !
अचेल केही सेलिब्रिटी, आइ मिन एककिसिमको आफ्नो ठाउँ बनाइसकेका मनुवा मित्र त कोही अग्रजलाई भेट्छु । कतिले बिर्सेको त कतिले नचिनेको ढर्रा पार्छन् । उनीहरुलाई आफू चिनाउन धेरै भूमिका बाँध्नुपर्छ । जस्तो किः सरसँग यो बेला, यो ठाउँमा भेट भाकोथ्यो नि…दाजुले त नेपाल बन्दको दिन मेरो साइकल लिएर फलानो एफएममा आफ्नो अन्तर्वाता दिन जानुभाथ्यो…दाइसँग त मैले सँगै नाटक खेलेको के त…सरले मलाई फलानो चलचित्रका लागि अडिसन लिनु भाको…अनि म त्यती रोमान्टिक छैन भनेर..हिरोको रोलमा नलेको, याद भो ?…अनि सरलाई मैले मेरो क्यानभाष, ब्रस देको के त तपाईंको विज्ञापन खिच्नको लागि…बिर्सनु भो ?…..अजव छ । यस्तो किन हुन्छ होला है ?
के पायो जुन तारा छुनेले,
के पायो आकाश छुनेले,
जिन्दगी आखिर भुँइमा फुलेको सुख दुःखको कथा हो ।# Banphool: वनफूल (शव्दः महेश पौड्याल)
काकाकुल पोखरा ! आज हाइवे हेर्ने योजना तुहिएको छ । आज फेरि पानी खोज्न जानु छ । आज फेरि त्यही रंगिविरंगी भिडमा तछाडमछाड गर्नु छ । किनकी आज पानी खोज्न जानु छ !
आज बिहानै चिया समयमा सिनेम्याक्सबाट भ्यानडमको एउटा चलचित्र हेरियो । अब भ्यानडम भनेसि कस्ता चलचित्र हुन्छन् भनेर भनिरन नपर्ला ! चलचित्र गज्जव राम्रो थियो । सरी नाम चाँहि था भएन । चलचित्रमा हिरोको हतियार हामै्र नेपाली खुकुरी देखेर झन् खुशी लाग्यो । त्यही खुकुरीको भराँ भिलेन भनाउँदाहरुलाई छपाछप पारेको दृष्य मजालाग्दो थियो । चलचित्र सकियो ।केही बेरमा रिमोट स्विप गरे यता कुनै एक नेपाली टिभीमा नेपाली चलचित्रको प्रोमो आउँदैरछ । अनि त्यसका हिरोले त आम्मामा विदेशी आयातीत खेलौना बन्दुकले ढिच्यु–ढिच्यु, भिलेन भनाउँदाहरूलाई दि‘रा ।
अब फरक आँफै छुटाउनुस् ! [;)]
मलाई मोफसलका राष्ट्रिय पत्रकारहरू प्रति साह्रो सन्देह छ ! ‘खै सर अव हाम्रो काम लेख्ने हो, लेखेर पठाइदिने हो । छापे छाप्छ नत्र क्यार्ने ?’ भन्छन् । यो छापिने र नछापिनेमा कसको हात हुन्छ भन्या, अचम्म !
मैले पढेको थे, यो समाजमा ‘हुने खाने र हुँदा खाने’को बाहुल्यता छ । तर हैन रहेछ, यहाँ त ‘गरि खाने र गरि खान नदिने’को पो बाहुल्यता रहेछ !
मलाई डर यति मात्र छ कि, कतै म ढिला त हुन्न ? कतै मैले गर्नु अघि यो काम अरु कसैले गरिभ्याउने पो हो कि । मलाई डर छ, अरु झैं म पनि सवैभन्दा पहिलो हुने होडमा फस्ने त हैन !
रंग छर्ने कुची समाउने हातमा बारुद छर्ने बन्दुक हुँदा कस्तो हुन्छ !?
ह्या नाटक…! नाटकको पनि कसैले कभर गर्छन् !? वाँ राजेश हमाल, मह, अमृत गुरुङ्
लगायतका आएका छन्…उनीरुको पछि लाग्न छाँडेर, काँ नाटकको पछि लाग्ने यार ! –
पोखराका केही पत्रकार भनाउँदाहरु !!!
साथीहरुको लिस्ट बढाउनको लागि मात्र
साथीहरुलाई Friend लिष्टमा याड नगरौं न साथी हो ।
June 26, 2014 by Bhaju Mahesh